Ciiddanka Uganda ee ku sugan Gobalka Sh/hoose oo ka cabanaya mushaar la’aan – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Ciiddanka Uganda ee ku sugan Gobalka Sh/hoose oo ka cabanaya mushaar la’aan
Wargeyska Maalinlaha ee MONITOR ee ka soo baxa magaalladda Kampala ayaa soo daabacay Wareysiyo ay la yeesheen qaar ka mid ah Ciiddanka Uganda ee ku sugan Fariisimo ku yaalla Gobalka Sh/hoose, kuwaasi oo sheegay inay ka soo daahaan Musharadka iyo Sahayda ay u baahan yihiin.
Wargeyska waxa uu qoray in Kharajka ku baxa dagaalka Alshabaab ka sarreeyo midka ay Saraakiisha ay ku qiimeeyaan.
Mid ka mid ah Ciiddankaasi ayaa sheegay inay xaabo ka raadsadaan goobaha dagaalka ee ay joogaan, si ay cunto ugu karsadaan.
Askari kale ayaa cabasho ka keenay Mushaarka la siiyo ,wuxuuna tilmaamay in loo sheegay in mushaar ahaan bil kasta la siin doono ugu yaraan 828 Dollar, balse haatan la siiyo lacag dhan 628 Dollar.
Dhinaca kale, Afhayeenka Ciiddanka Uganda, Richard Karamire waxa uu sharaxaad ka bixiyey Lacagta 300 Dollar ee laga jaro Ciiddankoda joogo Somalia, wuxuuna xusay in 100 Dollar loo siiyo Askari kasta si uu ugu maareeyo baahidisa Aagga Dagaalka, halka 100-kale ay Dowladda Uganda u qaadato Kharajkii lagu soo daad-gureeyey Ciiddankaasi.
Dhinaca kale, Afhayeenka waxa uu iska fogeeyey Eedeymaha ay Askarta Ugandese-ka ku sheegeen in la xadiday saamiga cunta garaam ahaan loo siiyo.
“Ma aha run, waayo Xafiiska QM ee Taageeradda Somalia ayaa bixiya cunto ku filan” ayuu yiri Afhayeenka Ciiddanka Uganda, oo intaasi ku daray inay jirin xero Milliteri oo laga helo cunto ku filan, sida Somalia oo kale.
Waxaa kale oo uu qiray in sababo dhinaca dib-u-dhaca Gaadiidka sababto in Ciiddamadda la gaarsiiyo Sahaydooda caadiga.
Taliyaha Guutadda Ciiddanka Uganad ee joogta somaalia, PAUL L’OKECHwaxa uu xusay in dhibaatada dhinaca Gaadiidka u sabab tahay Miinooyinka ay Alshabaab ku aasaan Waddooyinka ay AMISOM isticmaalaan, kuwaasi oo uu xusay inay carqaladeeyaan Kolonyada Gaadiidka wada sahayda.
Si kastaba ha ahaatee, Ciiddanka Uganda waxay Garoon Diyaaradeed ka dhisanayaan magaalladda Baraawe, si sahayda AMISOM loo gaarsiiyo Ciiddankooda ka haw-gala Gobalka Sh/hoose.